Budada Exemestane (107868-30-4) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Budada Caanaha Qamriga ah (107868-30-4)
Kiimikada 'Exemestane Powder' waa nooc ka mid ah daroogada daaweynta hoormoonka waxaana sidoo kale loo yaqaanaa magaca caanka ah, budada Aromasin. Waa daaweyn haweenka qaba kansarka naasaha oo horey u lahaa cilladahooda.
Qalabka Cabbiraadda Caanaha (107868-30-4)
Budada Caanaha Qufacsan (107868-30-4) Sharaxaad
Exemestane, magaca calaamadda Aromasin. Waa Aromatase Inhibitor. Farsamooyinka ficilka ah ee budada Exemestane ayaa ah sida Aromatase Inhibitor. Waa daaweyn ka-hortag u ah aromatase kaas oo si waxtar leh u xaddidaya dheecaanka estrogen ee haweenka postmenopausal waxaana loo isticmaalaa daaweyn loo yaqaan 'estrogen receptor' kansarka naas-nuujinta, badanaaba dib-u-gurasho iyo ka dib markii lagu fashilmay tamoxifen. Buuxsantaha 'Exemestane' ayaa la xidhiidha heerarka hooseeya ee heerarka serum enzim sareeya inta lagu jiro daweynta iyo dhacdooyin dhif ah oo ka mid ah dhaawacyada kalyaha ee muuqda.
Kobaca unugyada kansarka naasuhu waxay noqon karaan xayawaan ku tiirsan. Aromatase (Exemestane) waa unugyada ugu muhiimsan ee bedelaya asrogens si ay u noolaadaan dumarka horay iyo postmenopausal. Inkastoo ilaha ugu muhiimsan ee estrogen (hormoonka estradiol) waa haweenka uurka ku jira haweenka premenopausal, ilaha ugu muhiimsan ee haweenka ku dhaca haweenka postmenopausal waxay ka imanayaan isbedelka adrenal iyo xajiin (iyorostenedion iyo testosterone) ilaa estrogens (estrone iyo estradiol) by enzyme aromatase ee unugyada dillaaca. Kufsashada xayawaanka ee aromatase xakameyntu waa daaweyn wax ku ool ah oo xushmeynaya qaar ka mid ah bukaanka postmenopausal oo qaba kansarka naasaha ee hormoon. Budada Cuncunka Cabbitaanka waa mid aan dib u dhicin, aromaticase waxtar leh, qaabdhismeed la xiriira substrate dabiiciga ah iyo orrostion. Waxay u muuqataa sida substrate been ah oo loogu talagalay enzyme aromaticase, waxaana lagu baaraandegaa dhexdhexaad ah oo ku xiran goobta loo yaqaan "enzyme" kaas oo keena in la nuujiyo, saameyn loo yaqaan "isdilidda isdilka". Duufka dheeraadka ah ayaa si weyn hoos u dhigaya diirada qoyaanka estrogen ee haweenka postmenopausal, laakiin wax saameyn ah looma ogaan karo biosynthesis adrenal of corticosteroids ama aldosterone. Kansarka hoos loogu dhigo xaddiga serum iyo burooyinka ee estrogen ayaa dib u dhigaya kobaca tumida iyo horumarka cudurka. Kalluunka Exemestane ayaa saameyn ku yeelan kara enzymes kale oo ku lug leh jidka steroidogenic ilaa xaddiga ugu yaraan 600 ka sarreeya ka horjoogsanaanta enzyme aromatase.
Budada Caanaha Qufacsan (107868-30-4) Smamnuucista
Product Name Boodhka caanaha ah
Magaca Kiimikada 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Fasalka Daroogada aromatase inhibitor
Molecular Wsideed 296.41 g / mol
barafku Psaliid 155.13 ° C
Biological Life-Life saacadood 24
Application loo isticmaalo in lagu daaweeyo kansarka naasaha haweenka ka dib dumarka (haweenka uurka ku jira).
WKoofiyadu waa budada loo yaqaan 'Raw Exemestane' (107868-30-4)?
Daawada budada ah waa daawo loo isticmaalo in lagu daaweeyo kansarka naasaha dumarka uurka ku jira.
Qalabka Exemestane / Aromasin waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada kansarka naasaha qaarkood (sida kansarka naas-nuujinta ee hormoonka-hormoonka naasaha) dumarka ka dib dhalmo-dayska. Exemestane sidoo kale waxaa loo isticmaalaa si looga caawiyo ka hortagga kansarka ka soo laabashada. Kansarka naasaha qaarkood ayaa loo sameeyaa si ay u koraan si dhakhso ah hormoon dabiici ah oo loo yaqaan estrogen. Kiimikada 'Exemestane Powder' waxay hoos u dhigtaa qiyaasta estrogen ee jirka ka dhigo waxayna caawisaa in ay hoos u dhacdo ama dib ugu noqoto koritaanka kansarka naasaha. Eksemestane badanaa looma isticmaalo dumarka da'da ilmaha.
Sidee budada loo yaqaan Extractestane (107868-30-4) shuqullada
Kansarka naasaha badankood waxaa lagu dhiirrigeliyaa in uu koro hormoonka haweenka ee hoormoonka estrogen iyo progesterone. Kansarka naasaha waxa la yiraahdaa hormoonka xasaasiyadda ama hormoonka xasaasiyadeed ee hormoonka. Xannibaadda saameynta hormoonnadaas ayaa daaweyn kara kansarka naasaha.
Dumarka ku dhacay menopause, estrogen waxaa badanaaba soo saaraa iyada oo la beddelo isrogens (hormoonada galmada ee soo saaray qanjirrada adrenal) ee ku jira oestrogens. Nidaamkan waxaa lagu magacaabaa aromatisation waxayna dhacdaa inta badan unugyada dufanka, murqaha iyo maqaarka. Waxay u baahan tahay enzme gaar ah oo lagu magacaabo aromatase.
Exemestane ayaa xannibaya geedi socodka aromatisation. Sidaas awgeed waxay hoos u dhigtaa qiyaasta estrogen ee jirka. Bilowga kansarka naasaha, qaadashada tijaabada (exemestane) ayaa kaa caawin karta joojinta kansarka naasaha. Kansarka naasaha oo sareeya, unugyada kansarku way sii yaraanayaan ama joojin karaan gebi ahaanba.
Budada Caanaha Qamriga ah (107868-30-4) qiyaasta
Qiyaasta lagu taliyey AROMASIN horay iyo kaansarka naasaha ee hore ayaa ah hal kiniini 25 mg kiniin ah maalin kasta cuntada kadib.
* Daaweynta xayawaanka ee dumarka postmenopausal oo leh kansar naas-nuujinta hore ee kansarka naasaha hore u helay laba illaa seddex sano oo tamoxifen ahna loo beddelay AROMASIN dhammaystir guud ahaan shan sano oo isku xigta oo lagu daweeyo hormoonka daweynta.
* Daaweynta kansarka naasaha ee dumarka postmenopausal oo cudurkeenu uu kor u kacay daaweynta tamoxifen.
Budada Caanaha Qamriga ah (107868-30-4) faa'iidooyinka
Daraasada IES (Daraasada Intergroup Exemestane) ayaa lagu bilaabay 1998 waxaana la barbardhigay isbeddelka Aromasin ka dib markii loo soo celiyey tamoxifen for 2 illaa 3 si ay u sii joogaan tamoxifen sanado 5. Natiijooyinka ayaa muujiyay in loo bedelay budada Aromasin ee 2 illaa 3 sano ka dib markay qaadatay tamoxifen 2 sanado 3 (guud ahaan sanadaha 5 ee daawada hormoonnada daaweynta hormoonnada) waxay ka fiicnayd intii ay joogeen tamoxifen for 5 sanadka:
* Kordhinta waqtiga ka hor inta kansarku ku soo noqnoqon kuwa la kulma soo noqoshada
* Yaraynta khatarta kansarka cusub ee naasaha kale ee koraya
haweenka postmenopausal oo lagu garto kansarka naasaha-hormarka, hormarka hore ee naasaha.
Waxaa suurtagal ah in FDA ay oggolaato budada Aromasin in loo isticmaalo in lagu yareeyo halista khatarta sare leh, dumarka postmenopausal kuwaas oo aan la ogaan.
Soo iibso budada Exemestane laga bilaabo Buyaas.com
Hagaha Guud ee Exemestane si loogu daaweeyo kansarka naasaha ee dumarka
Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J., ... & Winquist, E. (2011). Cudurka maskaxda ee ka hortagga naasaha ee dumarka postmenopausal. New England Journal of Medicine, 364(25), 2381-2391.
Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M., ... & Melichar, B. (2013). Everolimus oo lagu daray exemestane bukaanada postmenopausal ee qaba HR + kansarka naasaha: BOLERO-2 falanqaynta natiijada kama-dambaynta ah ee badbaadada. Horumarinta daaweynta, 30(10), 870-884.
Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Láng, I., ... & Ciruelos, E. (2014). Cudurka kaadimareenka ee leh xakameynta ugxanta haweenka ee kansarka naasaha ee premenopausal. New England Journal of Medicine, 371(2), 107-118.
Kalluunka Clomiphene Citrate (Clomid) budada (50-41-9)
Raw Tamoxifen Citrate (54965-24-1)
Budada Cagaarka ah ee loo yaqaan "Anastrozole" (120511-73-1)
Budada Dhiigga Fluoxymesterone (76-43-7)